नमूना गाउँपालिका बनाउन मेल्लेखमा एमालेलाई जिताउन आवश्यक: खड्का ‘कृषि कर्म नै आम्दानीको मूल मर्म’लाई आत्मसाथ गरिने
खप्तड समाचारदाता बुधबार, वैशाख १४, २०७९
भीम बहादुर खड्का
स्थानीय तहको चुनावका लागि अहिले अछामको मेल्लेख गाउँपालिकामा गठबन्धन र नेकपा एमाले बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । काँग्रेस र नेकपा माओवादी बीच गठबन्धन भएको छ । देश भरी गठबन्धनमा रहेको नेकपा एस गठबन्धन भन्दा बाहिर छ । एमाले एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा देखिएको छ । एमालेका तर्फबाट अध्यक्षमा भीम बहादुर खड्का उम्मेद्वार बन्नु भएको छ । यस अघि माओवादीको नेतृत्वमा रहेको मेल्लेख गाउँपालिकामा एमालेले जिते पछि नयाँ के गर्छ ? तपाईलाई नै भोट किन हाल्ने ? हामीले अध्यक्षका उम्मेदवार भीम बहादुर खड्कासँग कुराकानी गरेका छौँ ।
एमालेका सबै प्रतिस्पर्धीलाई उछिनेर पालिकाको अध्यक्षको उम्मेद्वारका लागि तपाईले जिम्मेवारी पाउनु भयो । तपाईलाई भोट किन दिने ?
पहिलो कुरा मैले सबै प्रतिस्पर्धीलाई उछिनेर टिकट पाएको होईन । सबै प्रतिस्पर्धीको सल्लाह र सहमतिमा टिकट पाएको हो । पार्टीको सल्लाह अनुसार अध्यक्षको दावेदार सबै जसो वडाको अध्यक्षमा उठ्नु भएको छ । हामी सामुहिक रुपमा गाउँ पालिका बनाउनु पर्छ भन्ने अभियानका साथ साझा रुपमा उभिएका छौँ ।
तपाईलाई नै भोट किन ?
मलाई र नेकपा एमालेलाई भोट किन भने धेरै कारणहरु छन् । पहिलो कुरा देश भरीका ७५३ गाउँपालिका मध्ये पहिलो र नमूना गाउँपालिका बनाउनका लागि मेल्लेखमा एमालेलाई जिताउन आवश्यक छ । दोस्रो, समृद्ध मेल्लेख र खुसी मेल्लेखवासीको अवधारणालाई आत्मसाथ गरेर क्षेत्र अनुसार नविन र सृजनात्मक काम गर्नका लागि ।
तेस्रो, स्वास्थ्य, शिक्षा, विजुली, खानेपानी जस्ता नागरिका आधारभूत कुराहरुलाई निःशुल्क रुपमा पाउनका लागि । चौथो, उत्पादन सहितको ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि । पाँचौ, आम्दानी र रोजगारीसँग हरेक परिवारलाई जोडेनका लागि, यस्ता दर्जनौ कारणहरु छन् ।
स्थानीय सरकारको राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली, संस्कृति, शैक्षिक, स्वास्थ्य, भाषा, न्याय, शान्ति सुरक्षा लगायत समग्र विकासको लागि आधारभूत मान्यताहरु छन् । त्यही मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै हामी मेल्लेखमा विकासको नमुना मोडेल स्थापित गर्ने छौ । त्यसका लागि नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्य र मलाई भोट हाल्न मेरो अनुरोध हो । मलाई विश्वास छ, मेल्लेखका नागरिकले नागरिकमैत्री स्थानीय सरकार खोजेका छन् । हामी त्यसमा प्रतिवद्ध छौ ।
तपाईले दुईवटा प्रतिवद्धता भन्नु भयो, शिक्षा, स्वास्थ्य, विजुली निःशुल्क र नमूना विकास मोडेल ? त्यो सम्भव छ ?
सम्भावना मात्रै सयका सय प्रतिशत सम्भावना छ । हामीले यस अघिको स्थानिय सरकारले गरेको सबै कामको मसिनो गरि अध्ययन गरेका छौ । काम गर्ने तरिकालाई नजिकबाट हरेका छौँ । ती सबै विश्लेषण गरेर मैले भनि रहेको छु । मैले भनि रहेको कुरा केवल चुनावका लागि भोट आउला भनेर मात्रै भनेको होइन । म त मेल्लेख गाउँपालिकाको जिम्मेवार नागरिक पनि हुँ । त्यसकारण त्यो गर्नका लागि नै भनेको हो । कसरी सम्भाव होला भन्ने विषय उठ्न सक्छ त्यो चै यस अघि बनेको भौतिक विकासका कामको परिकल्पना, काम गर्ने तरिका फेर्नु पर्छ । त्यही विकासको नयाँ मोडलबाट यी सबैकुरा सम्भव हुन्छ । त्यति मात्रै होईन हामीले महिलाका लागि, जेष्ठ नागरिकका लागि अहिलेसम्म कुनै पालिका, संघीय सरकारले समेत नबनाएको नविन कार्यक्रम बनाउने छाँै । जसले खुसी मेल्लेखवासीको चित्र प्रष्ट देखिनेछ ।
यो त पाँच बर्ष भित्र गर्ने विषय होला । तपाईले जित्नु भयो भने तत्काल सुरु कसरी गर्नु हुन्छ ?
तपाईले भन्नु भए जस्तो यो पाँच बर्षे रणनीति त हो तर, काम जितिको तीन महिना भित्र सुरु हुन्छ । हामी पालिकाको बजेट बनाउने प्रणाली नै फेर्छौँ । विकासको र कामको बार्षि र पाँच बर्षे क्यालेण्डर बनाउछौँ । अहिले भोट माग्न गएजसरी नै हरेक वडाका नागरिकसँग काम र विकासको कुरा गर्न साक्षात्कार गछौँ । नेता, वडा अध्यक्षले सोचेर होइन, नागरिकले आबश्यकताका आधारमा भनेका योजनालाई अन्तिम रुप दिन्छौ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, सडक जस्ता सेवा प्रवाह र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कामलाई एकद्वार प्रणालीमा आधारित एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गरेर कामको तरिका नयाँ अपनाउँछौँ । ५ महिना भित्र हरेक वडामा विकास लागि पाँच बर्षे गुरुयोजना बनाएर विकासको नयाँ मोडेललाई नागरिकको सहमतिमा पारित गर्छौँ ।
म मेल्लेख गाउँपालिकाको नागरिक हुँ भन्ने गर्वल गर्ने गरि नागरिक तहमा म मेल्लेखको नागरिक हुनुमा गर्व छ भन्ने विषेश पहिचानको कार्यक्रम स्थापित गर्ने छौँ । सबै वडा र विद्यालयलाई प्राविधक रुपमा नयाँ तरिकारले जोड्छौँ । म दावीका साथ भन्छु त्यस्ता कति काम छन् जो देश भरीका पालिकामा भएका छैनन्। हाम्रो पालिकामा त सायद गठबन्धनका दल नेताले सोचेका पनि छैनन होला ।
तपाईले विकासमा उपभोक्तालाई जोड्ने भन्नु भएको छ, तपाईलाई ठकेदार उम्मेदवार भन्नेर आलोचना गरेको सुनिन्छ नी ?
हो हिजो सम्म म बोलिचालिको भाषामा भनिने ठकेदार तर मेरो भाषामा विकाससंग जोडिएको व्यवसाय हुँ । त्यही भएर नै मैले विकास र उपभोक्ता वा नागरिकको सहभाविगता, साझेदारीको कुरा उठाई रहेको छु । भौतिक विकासको काम कसरी हुन्छ भन्ने नजिकबाट छामेका कारणले मै तरिका बदल्छु भनि रहेको छ । तपाईले मेल्लेखका सडक देखि भौतिक विकासको काम पल्टाएर हेर्नुहोस्, लाटाको नाममा वाठाको रजाई भई रहेको छ । डोर हाजिरीमा ८०÷९० हजार बुझेर लिएको देखिन्छ, तर वास्तवमा त्यो कामको वारेमा त्यो व्यक्तिलाई थाहा नै छैन । हाजिर नक्कली छ । मेरो वडाको एउटा दलित वस्तिका दर्जनौ व्यक्ति कसैको ऋणको बन्धकमा बसेका भन्ने सुनिन्छ । त्यस्ता कुरा म अन्त्य गर्छु । म ठकेदार नेता होइन, विकास बुझेको अहिले त्यो व्यवसाय छाडेको निष्ठावान, इमान्दार व्यक्ति हुँ भन्ने मेरो दावी हो ।
तपाईले हरेक घरलाई आम्दानीसँग जोड्छु भन्नु भयो नी त्यो कसरी ?
अहिले हामीसँग सम्भावना छ तर त्यो सम्भावनालाई बाटो देखाउने व्यक्तिको अभाव छ । हामी भौतिक विकास भन्दा उत्पादन र सेवालाई प्राथमिकता दिनेछौ । एक टोल एक उत्पादनको रणनीतिलाई नीतिगत रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ । कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर गाउँ अनुसार उत्पादनको पकेट क्षेत्र बनाइने छ । ‘कृषि कर्म नै आम्दानीको मूल मर्म’लाई आत्मसाथ गरि हरेक परिवारलाई कृषिबाट आम्दानीमा जाड्ने गरि नयाँ कार्यक्रम ल्याईनेछ । उत्पादक, सरकार र सहकारीलाई जोडेर किसानको उत्पादनलाई बजारिकरणको सबै जिम्मा पालिकाले लिनेछ । किसानले बारीमा काम गरे पुग्छ । बारीमा काम गर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापनमा पनि पालिकाले सहयोग गर्नेछ । कृषिलाई उद्योगसँग जोडेर एक वडा एक कृषि उद्योग कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । कृषि पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । अर्को अघि मैले भनेको भौतिक विकासमा नागरिकलाई नयाँ तरिकाले जोडिने छ । मेरो आग्रह छ, मेल्लेखका वासिन्दाले नीति, कार्यक्रम हेरेर भोट हाल्ने छन् । हामी, दलित समुदायका सवालमा पनि समृद्धि र सीपसँग जोडेर फरक प्रकृतिको कार्यक्रम ल्याउँछौँ ।
मेल्लेख गाउँपालिकामा नेकपा एमालेले चुनाव जित्छ त ?
मेल्लेखमा नेकपा एमालेले चुनाव जित्छ । हिजोको स्थानिय तहको चुनाव हुँदा पनि नेकपा एमालेले चुनाव जित्नु पर्ने हो । तर, जित्दा जित्दैको चुनाव हारियो । कार्यपालिकामा हाम्रो बहुमत छ, नेतृत्वमा हामीले चुनाव हार्यौ । यस पटक त्यसबाट पाठ सिकेर हामी अगाडी बढ्छौँ । एमाले फुटेको छ नी भन्ने प्रश्न आउला । हो फुटेको छ त्यसको असर पक्का पर्छ ।
तर, नेकपा माओवादी र नेपाली काँग्रेसबाट पनि एमालेमा जोडिनु भएको छ । अर्को कुरा हामीलाई विश्वास छ, हाम्रा कार्यक्रम, योजना हेरेर हामीलाई नागरिकले भोट दिनु हुनेछ हामी जित्ने छौँ भन्नेमा हामी विश्वस्थ मात्रै होईन ढुक्क छु ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख १४, २०७९ १७:२८
लैंगिक हिंसा विरुद्ध बिषेश अभियान चलाईने: नगर प्रमुख पदका उम्मेदवार कुँवर बुधबार, वैशाख २१, २०७९